Ny Rahavavy Juliet Lithemba dia maherifon'ny fizahantany any Lesotho ankehitriny noho ny ady nataony tamin'ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Madagascar Malgache Vaovao » Ny Rahavavy Juliet Lithemba dia maherifon'ny fizahantany any Lesotho ankehitriny noho ny ady nataony tamin'ny COVID
Madagascar Malgache Vaovao • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • Safety • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Aprily 18, 2021
Ny UN News Center dia nizara fa ny olona toa an'i Thabana Ntlenyana avy any Lesotho no tena mahery fo amin'ny fanampiana ny olony hamakivaky ny COVID-19 pendemika
Anabavy Juliet Lithemba dia tandindon'ny mahery fo maro eran'izao tontolo izao izay mandeha amin'ny dingana fanampiny hahafahana mifehy ity areti-mandoza mahatsiravina ity. Today Rahavavy Juliet Lithemba dia natolotry ny World Tour Networ ny mari-pahaizana Hero Herok.
Tamin'ny tapaky ny volana aprily dia efa nahatratra 11,000 ny isan'ireo voan'ny virus tamin'ny fahafatesan'i 315 hoy i WHO. Nanomboka ny fampielezana vaksiny COVID-19 ny firenena tamin'ny 10 martsa 2021 taorian'ny nahazoany vaksiny tamin'ny alàlan'ny COVAX Facility. Dosis 16,000 eo ho eo no natolotra hatreto, indrindra ho an'ireo mpiasa laharana voalohany.
Manohana ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), ny Tahirim-bolan'ny ankizy ho an'ny UN (UNICEF), sy ireo mpiara-miasa hafa, ny manam-pahefana dia namorona hafatra kendrena ho an'ny vondrona manokana eo amin'ny fiarahamonina toy ny be antitra, ireo marefo ary ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina manana toe-javatra samihafa toy ny diabeta sy tosidra ambony.
Ny fizahantany dia mpamatsy vola lehibe ho an'ity Firenena atsimon'i Afrika ity. Ny ady amin'ny COVID-19 dia hamerina velona an'ity sehatra ity.
Ho an'ny Anabavy Juliet Lithemba, ny taona lasa dia "tsy misy tsy fahasoavana sy famindram-po avy any ambony", raha ny fanazavany izany. Ny mponina 77 taona ao amin'ny Mt Royal Convent an'ny Sisters of Charity of Ottawa, any amin'ny distrikan'i Leribe any Lesotho, dia tsy nahalala firy momba ny COVID-19 mandra-pahatongan'ny virtoaly nahafaty azy tany amin'ny trano fonenany sy ny rahavavavavavavikely namany.
Mba hiarovana ny zokiolona ao Lesotho, ny governemanta dia nanao hetsika fantatra amin'ny hoe fampielezan-kevitra momba ny risika sy ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Ny olona manampy olona no resahina.
Lesotho, fanjakana avo sy avo tsy voahodidin'i Afrika atsimo, dia ampitampitan'ny tambajotra renirano sy tandavan-tendrombohitra, ao anatin'izany ny tampon'ny Thabana Ntlenyana 3,482m. Eo amin'ny lembalemban'i Thaba Bosiu, akaikin'ny renivohitr'i Lesotho, Maseru, dia misy sisa tavela nanomboka tamin'ny fitondran'ny Mpanjaka Moshoeshoe tamin'ny taonjato faha-19. Tsy mijery ny Tendrombohitra Qiloane malaza i Thaba Bosiu, tandindona maharitra an'ny vahoaka Basotho an'ny firenena
Nanokana ny fiainany ho amin'ny fanompoana ara-pivavahana izy nanomboka tamin'ny 1964, fony izy 20 taona monja. Nandritra ny 47 taona nanolorany tena dia mbola tsy nahita fandrobana toy izany izy tamin'ny aretina toy ny nandritra ny areti-mandringana COVID-19.
Rahavavy Lithemba dia iray tamin'ireo olona voalohany no voatondro ho tranga voamarina tamin'ny Mey 2020 tao amin'ny trano fivoriamben'izy ireo rehefa noheveriny fa voan'ny sery izy.
"Tsy nahagaga ahy ny nahazo soritr'aretina gripa satria nandritra ny androm-piainako dia sahirana tamin'ny sery aho", hoy izy.
Tsy misy fanatsarana
Tsy nihatsara izany rehefa nandeha ny andro mandra-pahatongany tany amin'ny Hopitaly Motebang, toerana iray vitsivitsy monja avy eo amin'ny masera, mba hitsaboana azy. Ilay mpitsabo mpanampy nanampy azy tamin'io andro io dia nilaza taminy mba hitsapana ny COVID-19.
Rehefa avy nanamarina fa voan'io viriosy io ny Rahavavy Lithemba dia nafindra tany amin'ny hopitaly Berea hitokanana sy hanaraha-maso. Nahazo oksizenina isan'andro isan'andro izy nandritra ny 18 andro.
“Nampianarina hampiasa ny masinina oksizenina mihitsy aza aho. Azo antoka fa ho lava ny fijanonan'ny hopitaly. Fantatro izany rehefa lasa ny andro ”, hoy izy. Teo akaikin'ny fandriany tokoa ny rahavavavavaviny avy tao amin'ny masera, izay sahirana mafy nifoka, nihinana na nisotro rano mihitsy aza.
"Tsy afaka nitelina na nitazona na inona na inona izy", hoy ny Rahavavy Lithemba. Maty tampoka ny mpifanila vodirindrina aminy.
Niparitaka be ny viriosy ka isaky ny andro hafa dia misy masera iray no entina any amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina akaiky indrindra, homena oksizena. Ny zokiny indrindra tamin'ireo rahavavy dia 96 lehibe.
'Be loatra ny mpiady' very
Amin'ny fitambarany, ny trano fivarotan-tena dia nahitana tranga miisa 17 ary telo ratsy. Mampalahelo fa amin'ireo tranga voamarina ireo dia fito no maty.
“Fotoam-pitsapana ho anay izao. Betsaka ny mpiady resintsika tamin'ity ady ity ary tsy hitovy velively ny fiainana ”, hoy ny Rahavavy Lithemba. Nilaza izy sy ireo olona nipetraka tao an-trano fa tsy fantany ny fomba sy ny toerana mety nahitana azy tamin'izany.
Taorian'ny onja voalohany an'ny virus dia nanakarama orinasa fanadiovana sy famonoana otrikaretina ny trano fonenan'ny convent, nandidy ny tsirairay hanaraka ny protokolon'ny COVID-19 ary avelao hijanona ao amin'ny campus ny mpiasa rehetra ao aminy.
Nakatona vonjimaika ny efitrano fandraisam-bahiny, mba tsy hihetsika ao an-trano sy any ivelan'ny trano.
“Tsy maintsy mijanona ao amin'ny efitranony avy ny tsirairay. Misy mpanadio isaky ny efitrano sy ny fidirana rehetra ary ny teboka fivoahana. Mifanaraka amin'ny fisintahana ara-batana ao amin'ny efitrano fisakafoananay sy rehefa mandeha mivavaka isan'andro isika. Tena nanatri-maso ny fisian'io virus io tamin'ny fomba henjana indrindra izahay, ary manao izay hampijery antsika tsara ”, hoy ny Rahavavy Lithemba.
"Ny mponina mihantitra dia mora tohin'ny COVID-19 ary voan'ny areti-mifindra izy ireo satria atahorana indrindra tratran'ny aretina virus noho ny hery fiarovan'ny vatana malemy sy ny fahasalamana efa nisy teo aloha," hoy i Richard Banda, Representative of IZA Lesotho.
Izany no antony anohanan'ny ekipan'ny ONU ao Lesotho hetsika fiaraha-mientan'ny vondrom-piarahamonina, indrindra ny fikendrena ireo olona marefo, ary ny fikarakarana fivoriana manokana izay anaovana lahateny fampiroboroboana ny fahadiovana, mandritra ny fandinihana ny Do's and Don'ts an'ny COVID-19.
"Tsy maintsy manamafy ny asantsika isika mba hahatratrarana ny fandrakofam-pahasalamana manerantany, ary hampiasa vola amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'ny fahasalamana, hiatrehana ny tsy fitoviana ary hanangana tontolo ara-drariny sy salama kokoa," hoy i Mr Banda nanampy.
Tamin'ny tapaky ny volana aprily dia efa nahatratra 11,000 ny isan'ireo voan'ny virus namono olona 315 hoy i WHO. Nanomboka ny fampielezana vaksiny COVID-19 ny firenena tamin'ny 10 martsa 2021 taorian'ny nahazoany vaksiny tamin'ny alàlan'ny COVAX Facility. Dosis 16,000 eo ho eo no natolotra hatreto, indrindra ho an'ireo mpiasa laharana voalohany.
Tifitra mamonjy aina
“Ny aretina rehetra dia mila fanasitranana, ary na dia tsy lavorary aza io vaksininy io, farafaharatsiny mampihena ny vonoana ho faty sy marary mafy. Izay ihany ny fanantenana ilaintsika ”, hoy Rahavavy Lithemba.
Raisiny ankehitriny ny fepetra fisorohana rehetra misy, mba hampihenana ny tahan'ny aretina, mandra-pahatongan'ny firenena voan'ny areti-mandringana.
Amin'ny maha-iray amin'ireo sisa velona COVID-19, dia nanentana ny manam-pahefana ny Rahavavy Lithemba mba hampiasa loharanon-karena hahafahan'ny ekipa mpiray tsikombakomba mitsidika ny vazan-tany rehetra. Ity, hoy izy, dia tokony hifantoka amin'ny fanatonana ny tsirairay, ao anatin'izany ireo any amin'ny faritra sarotra aleha.
Ny World Network Network dia manaiky ireo mahery fo maro tsy fantatra amin'ity krizy ity ary manome an-dRahavavy Juliet Lithemba mba ho tafiditra ao anatin'ny maherifon'ny fizahantany.
Ny hafatra ho an'izao tontolo izao: Raiso ny fitifiranao rehefa azonao izany.
SOURCE Ivotoeram-baovao UN